Gaa’ela | Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa
“Gaa’ela” jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta’edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta’een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta’uun isaanii wayita mirkanaa’uudha.
Akkaataa seera maatii Itiyoophiyaa bara 1952 baheen gaa’illii gosaa sadiin akka raawwatamuu danda’uu ta’e jira. Isaanis;
Gaa’elaa sirna siviilii;-
Dhiirri tokkoo fi dubartiin takka gaa’ela raawwachuudhaaf walii galuu isaanii fuula qoondaala galmee kabajaa biratti dhiyaachuun yeroo ibsanii fi qondaalli galmee kabajaas fedha isaanii kana simachuun yeroo galmeessuu gaa’elii siivilii raawwate jedhama.
Gaa’ela karaa Amantiin gaggeeffamu
Dhiirri tokko fi dubartiin takka karaa amantaa isaanitiin ykn isaan keessa karaa amantaa tokkoon bu’uura gochuun gaa’ela ragga’e uummachuuf ulaagaalee barbaachisan guutuudhaan yoo raawwatedha.
Gaa’ela karaa Aadaa
Dhiirri tokko fi dubartiin takka aadaa naannoo itti jiraataniin ykn aadaa nama tokkoon bu’uura godhachuun gaa’ela ragga’e uummachuudhaaf sirnoota barbaachisaniin yeroo raawwatamedha.
2. Faayidaa galmeessa taatee gaa’elaa;
Gaa’ela raawwatameef ragaa seera qabeessa ta’e mirkaneessuf,
Gaa’eli seera qabeessa ta’uu isa mirkaneesuuf,
Firummaa wal fuutotaa fi walitti dhufeenya isaani seera qabeessa gochuuf;
Mirgaa seerummaa daa’imanni kunuunsaa fi egumsaa maatii argachu akka qabdu mirkaneesuuf,
Dhaaltummaa seeraa qabeessa gochuuf,
Maatirraa deeggarsa argachuuf;
Walfuutoota keessa tokko yoo addunyaa kana irraa boqate gaaffii inshuuraansii dhiyeessuuf;
Seera qabeessummaa daa’immanii mirkaneessuuf
Hiikaan gaa’elaa yeroo raawwatamu guddistuu daa’imaa murteessuuf
Biyya alaa deemuuf paaspoortii baasuuf;
Abbaa seerummaa ijoollee ofii murteessuuf akkasumas qaama biraa irraa kan dhalatan galmeessisuuf,
Gaaffii jijjiiraa lammummaa gaafachuuf;
Guyyaa fi iddoo gaa’ilii itti raawwate beeksisuun odeeffannoo seera qabeessa ta’e argachuu fi kkf..
3. Iddoo Galmeessi Gaa’elaa Itti Adeemsifamu
Iddoon galmeessa gaa’elaa wal fuutoonni lamaan jiraachuuf iddoo isaan murteessan, wal fuutota lamaan keessaa tokkoon isaanii iddoo jiraachaa turan ykn iddoo teessoo jireenya iddilee maatii wal fuutotaa ykn firoota isaanii keessaa tokkootti ta’a.
Daangaa Yeroo Galmeessa Gaa’elaa
Gaa’elli raawwate guyyoota 30 keessatti galmaa’uu qaba.
Gaa’elli raawwatee guyyaa 31 hanga 365 tti keessatti kan galmaa’e “kan yeroon irraa turee jedhame galmaa’a”
Gaa’elli raawwate tokko waggaa tokkoon booda kan galmeeffame yoo ta’e galmee “kan daangaan yeroo galmeessaa irra darbee ” irratti galma’a.
Dirqama Gaa’ela Galmeessisuu
Gaa’elli kan raawwatame fuula qondaala galmee kabajaatti yoo ta’e qondaalii galmee kabajaa gaa’elicha battalumatti galmeessuu qaba.
Gaa’elichi karaa Amantaatin ykn aadaan kan raawwatame yoo ta’e, wal-fuutoonni ragaa labsii irratti ta’en qondaala galmee kabajaatti dhiyeessun gaa’ela isaanii galmeessisuuf dirqama qabu.
HaalaRagaa gaa’ela Amantaan/Aadaan Rawwatamee
Gaa’elli kan raawwate sirna Amantaan ykn aadaan yoo ta’e ragaan kennamuu tartiiba odeeffannoowwan armaan gadii kana qabachuu qaba;
Maqaa, umrii, iddoo jireenya wal-fuutotaa
Guyyaa fi iddoo gaa’elli itti raawwatamee fi
Maqaa fi iddoo jireenya idilee ragootaa
Kan hammate ragaan gaa’elaa waldaa ykn jaarsolii gaa’ela raawwachiisan irraa battalumatti misirrootaaf kennamuu qaba.
Wal fuutoonni lamaan guyyaa gaa’ela isaanii raawwachuuf murteeffatan yoo xiqqaate ji’a tokko dursanii qondaala galmee kabajaa beeksisuu qabu. Kunis gaa’ela karaa sirna aadaa fi amantaan raawwatamu hin ilaallatu.
Qondaallii galmee kabajaa guyyaa gaa’elli raawwatu wal fuutota waliin erga irratti dubbateen booda borumtaa isaa guyyaa gaa’ellii raawwatu ibsuun iddoo ifa ta’etti beeksisa guyyaa 15f turu ni baasa.
Beeksisi kun guyyaa ba’ee eegalee guyyoota 15 jiran keessatti mormiin kan jiru yoo ta’e barreeffamaan dhiyaachuutu irra jiraata. Mormii dhiyeessuu kan danda’anis maatii wal fuutotaafi dhalattoota, abbaa alangaa, guddistoota ykn nama gaa’ela waliin nan qaba jedhu ta’uu qaba.
Qondaallii galmee kabajaa komii dhiyaataniif guyyoota 5 gidduutti murtii itti kennee isaan beeksisuu qaba.
Dhiirris ta’e dubartiin umurii isaani waggaa 18 osoo hin guutiin gaa’ela raawwachuu hin danda’an.
Sababaa ulfaata ta’e yeroo qunnamuu maatiin wal fuutota ykn isaan keessa maatii tokkoon ykn guddistuun gaaffii dhiyyeessan irratti hunda’uun manni murtii waliigalaa umrii isaanii irraa waggaa lamaa hin callee hir’isuun akka wal fudhan hayyamuu ni danda’a.
Akkaatuma seerri dhorkee jiruun firooma foonii kan qaban lamaan gidduutti gaa’ela raawwachuun dhorkaadha.
Gaa’elli akka hin raawwatamneef manni murtii barreeffamaan kan beeksise yoo ta’e qondaalli galmee kabajaa gaa’elicha hin galmeessu.
Gaa’ilii raawwatamuu kammiyyuu seera maatii Feederaalaa ykn Naannoo bu’uura gochuun raawwatama.
Gaa’ila sirna aadaatiin raawwatan dhiirris ta’e dubartiin gaa’ilii isaani kan raawwatamuu qabu sirna aadaa naannoo jireenyaa isaanitiin ykn lamaan keessa sirna aadaa isa tokkoon kan gaggeeffame ta’u qabaata.
Labsii 760/2004 hojirraa oluun dura gaa’ilaa sirnaa aadaatiin ykn amantiin raawwatanii ragaa isaanii harka badee yoo ta’e ragoota gamaa dhiiraatiin 2, gama dubartii tiin lama walumaagalatti 4 dhiyyeessuun gaa’ili waajjira bulchiinsa sadarkaa gadii argamuu iddoo jireenyaa idilee isaanii keessatti galma’aa. Kun ta’us, maatiin wal fuutoota ragaa ta’anii dhiyaachuu hin danda’an.
Dubartiin takka qophaa jiraachuuf daangaa yeroo seeraan ta’e osoo hin darbiin dhiira bira waliin gaa’ela raawwachuu hin dandeessuu.
Gaa’elli raawwatame kan jedhamu wal fuutoonni lamaan wal fuudhuuf bilisaan heyyama isaani guutuu wayita kennan qofa.
Ragoonni gama misirichaan 2, gama misirittiin 2 walumaagalatti 4 dhiyyaachuu qabu.
Gaa’ilichii kan raawwatamuu iddoo jireenya idilee maatii walfuutootaatii ykn firootan isaanii yoo ta’e,waraqaa eenyummaa jiraata ykn biyyoolessaa maatii ykn firootaa ykn waajjira bulchiinsa sadarkaa gadii jiru irraa ragaa jiraata ta’uu ibsuu dhiyeessu qabu.
Misirrichi/ttiin armaan dura fuudhee/heerumtee/ kan hiike/te yoo ta’e waraqaan ragaa hiika gaaa’elaa dhiyaachuu qaba.
Misirrichi/ttiin armaan dura fuudhee/heerumtee/ kan duute/du’e yoo ta’e waraqaan ragaa du’aa yoo jiraate dhiyaachuu qaba.
Wal fuutoonni suuraa gabaabaa kan ji’a ja’aa asitti yeroo tokkicha ka’anii fi 3x4 ta’e lama lama dhiyeeffachuu qabu.
Gaa’ela sirna amantaa fi aadaan raawwatamee ture tokko galmeessisuuf ragooleen ykn nama sirnicha irratti argame fuula qondaala galmee kabajaatti qaamaan dhiyaatanii mallattoo isaanii teechisuu qabu.
Waraqaan ragaa dhalootaa walfuutotaa yoo jiraate dhiyaachuu qaba.
Duraa Duuba Raawwii Gaa’elaa Fuuldura Qondaala Galmee Kabajaatti Raawwatamuu
Qondaalli galmee kabajaa haal-dureewwanii fi ragooleen deeggarsaa barbaachisan hundi guutamuu isaa gaaffachuun ni mirkaneeffata.
Gaa’elichi wal fuutoota lamanii fi ragooleen gama tokkon lama lama bakka argamanitti ifatti raawwatama.
Walfuutoonni fi ragooleen isaanii jecha kakuu kennuun duratti jechi isaan kennan kun kan itti gaafatamummaa qaqqabsiisu ta’uu isaa qondaalli galmee kabajaa ifatti hubachiisuu qaba.
Walfuutoonni fi ragooleen yeroo sirni gaa’ela raawwatu haal-dureewwan taa’an cabsuu dhabuu isaanii jechi kakuu barreeffamaan ta’uu isa mirkaneessu qabu.
Walfuutoonni lamaanii fi ragooleen isaanii galmee kabajaa irratti mallatteessuu qabu.
Qondaalli galmee kabajaa wal fuutoonni lamaan gaa’ela seera qabeessa ta’een kan walitti hidhaman ta’uu hubachiisuun waraqaa ragaa gaa’elaa ni kennaaf.